HomeIZAO TONTOLO IZAOEOROPEANINA30 GresyMitokona any Gresy ny mpiasan'ny lamasinina
Mitokona any Gresy ny mpiasan'ny lamasinina
20 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 30 Gresy, EOROPEANINA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY 0
mitokona amin'ny volon'ireo mpiasa ny gara
Manohitra ny ‘Growth Act’ ataon'ny governemanta vaovao dia nanambara ny mpiasan'ny lalamby any Athens fa hamely ny 24 adiny iray.
Nambaran'ireo mpiasan'ny lalamby, tram, bus ary trolleybus ao Athens fa handray anjara amin'ny hetsika fitokonana 24 adiny iray izy ireo hanoherana ny lalàna vaovao momba ny fitomboan'ny demokrasia vaovao (ND). Hatao ny talata ho avy izao ny lalamby herinaratra an-tanànan'i Kifissia-Piraeus (ISAP) sy ny fitateram-bahoaka renivohitra.
Amin’io andro io ihany, ny vatam-paty sy ny fantsona ao anaty seranana dia ho zakanina ihany koa ary ny mpiasa an-dranomasina dia tsy hiasa avy ao 6 ny talata ka 6 ny alarobia izao.
Vao nanambara ny mpiambina ny sambo grika vao haingana fa hanao ny fitokonana izy ireo. (haber.sol)
Nanao fitokonana isan'andro ny mpiasan'ny làlamby frantsay 02 / 04 / 2018 Ao Frantsa, ny mpiasa ao amin'ny SNCF 3 dia manomboka ny asa fanaony mandritra ny volana iray amin'ny alatsinainy. Nampitandrina ireo olom-pirenena frantsay ny tompon'andraikitry ny 3 fa ny 77% amin'ireo mpanafika dia hanatevin-daharana ilay fitokonana amin'ny talata, ary nilaza fa henjana ny fifamoivoizana. Ao anatin'ny sehatry ny antsoina hoe "Railway Challenge", ireo mpiasa ao amin'ny fikambanana dia hanao ny asan'ny 3 andro manontolo - mialà mandritra ny volana 36 manaraka. Ireo mpiasa ao amin'ny SNCF dia manao fihetsiketsehana amin'ny volavolan'ny filoha Emmanuel Macron mba hanohanana ny fomba fitantanana ny lalamby frantsay. Maniry ihany koa i Macron hanova ny sata manokana an'ny mpiasan'ny lamasinina araka ny lalàna. Tena asa ara-batana tena izy io, miaraka amin'ireo mpiasan'ny lalamby miasa andro aman'alina ary faran'ny herinandro dia miova aloha.
Mpiasa mpitrandraka fitaterana miomana ny hitokona 08 / 05 / 2019 Fitaterana Ny fifanarahana fifanarahana iombonana eo amin'ny Fiarandàlan'ny Railway-İş, izay nokarakaraina tao amin'ny Park sy ny mpiasa an-tanindrazana ao an-toerana, dia voasakana. Manana mpikambana an'arivony ao amin'ny toeram-pitaterana an'habakabaka isika. Raha tsy ekena ny fangatahantsika, dia hitokona isika. " NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN'I Adapazari Railway-Business Union Kocaeli Transportation Park Representative Halit Turan, ny sendika mpampiasa local-Sen dia nilaza fa tsy afaka ny hanao fanekena izy ireo Namaly ny fanontaniana tao amin'ny gazety i Turan ary nilaza hoe: "Ny faniriantsika dia tena antonony sy maha-olona. Fitaterana Manana mpikambana an'arivony ao amin'ny Park isika. Ny karamantsika dia karama farany indrindra, izany hoe 2020 TL. Miaraka amin'ny tombontsoa ara-tsosialy hafa, ny totalin'ny 2 arivo 750 dia mahatratra TL. Ny fangatahantsika dia ny hoe ny karamantsika dia 3.
Manao fitokonana any Frantsa ny mpiasa 13 / 06 / 2013 Mpiasa Mitam-piadiana Mitokona Ao Frantsa Ny mpanohitra dia manohitra ny tetikasan'ny governemanta sosialista hampiray ny orinasan-dalamby samihafa ao amin'ny firenena. Noho ny fitokonana, ny fitaterana haingam-pandeha haingam-pandeha dia andrasana ho malemy manerana ny firenena. Ny National Railway dia nanambara fa ny 10 ihany no hanompo avy amin'ny seranam-piaramanidina 4 rahampitso noho ny fitokonana. Noho ny fitokonana, ny tapak'i Frantsa eo anelanelan'i Italia sy Soisa dia hofoanana amin'ny antsasany. Ny fitokonana dia tsy andoavam-bola amin'ny fiasan'ny serivisy serivisy avy any Frantsa mankany Belzika sy Angletera. Noho ny fitokonana dia ho foana ny fiaran-dalamby eo anelanelan'i Frantsa sy Espana.
Mpiasa Fitateram-Bahoaka Mitokona Mitokona Ao Frantsa 01 / 06 / 2016 Ireo mpiasan'ny làlamby dia mandray anjara amin'ny fitokonana any Frantsa: Hatramin'izao, ireo mpiasan'ny arabe dia nandray anjara tamin'ny fitokonambe nokarakaraina tany Frantsa mba hanohitra ny fanavaozana ny lalàna momba ny asa. Tany Frantsa dia nandray anjara tamin'ireo fitokonana nokarakarain'ireo mpiasan'ny lalamby mba hanohitra ny fanavaozana ny lalàna momba ny asa ary niely nanerana ny firenena. Noho ny tsy fahampian'ny solika tao amin'ny firenena taorian'ny fitokonan'ireo mpiasan'ny fitaterana, ny vahoaka dia nanary ny lalamby tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ny fitokonana manohitra ny fanovana ataon'ny governemanta amin'ny lalàna momba ny asa dia efa niparitaka tany amin'ny sehatry ny fitaterana. Ny fandraisan'anjaran'ny mpiasan'ny lamasinina dia nalemy ny fitaterana tao amin'ny firenena. Any amin'ny faritra maro, ny fiarandalamby dia nampidina ny isan'ireo sidina. Air Pilot Air France ...
Mitokona any Espana ny mpiasan'ny lamasinina 01 / 08 / 2019 Tany Espaina, ny ekipa 700 fiaran-dalamby dia nofoanana noho ny fitokonana nantsoin'ny General Labor Confederation (CGT) izay ifandraisan'ny mpiasa lalamby. Nanapa-kevitra ny hitokona ny sendika taorian'ny fifampiraharahana eo amin'ny Espana Railway (RENFE) sy ny General Labor Confederation (CGT). Ny sendikan'ny jeneraly Confederation générale momba ny asa (CGT) dia mitady vahaolana hametrahana ireo entana toy ny vidim-bidy ambany, ny fisian'ny outsourcing ary ny tsy fahampian'ny olona. Tsiahivina fa ny 12.00, iray amin'ireo mpitatitra entana, mpandeha, commuter ary haingam-pandeha ambony eto an-toerana, dia nofoanana taorian'ny fanapahan-kevitry ny fitokonana nataon'ny 16.00 sy 20.00 ary eo anelanelan'ny 24.00 sy 700. Fikambanan'ny sendika fanamafisana orina (CGT)…
Fotoam-pisaonana ho an'ireo Machineists izay maty tamin'ny lozam-piaramanidina tao Bilecik
Göztepe Ümraniye Metro Line dia nanomboka nanomboka indray
Nanao fitokonana isan'andro ny mpiasan'ny làlamby frantsay
Mpiasa mpitrandraka fitaterana miomana ny hitokona
Manao fitokonana any Frantsa ny mpiasa
Mpiasa Fitateram-Bahoaka Mitokona Mitokona Ao Frantsa
Mitokona any Espana ny mpiasan'ny lamasinina
Ireo mpiasa an-dalamby namboatra fitokonana
Nanapa-kevitra ny hanohy ny fitokonana ireo mpiasa ao İZBAN
Androany teo amin'ny tantara: 14 September 1908 Anatoliana sy Oriental Railway mpiasa no nitokona ...
Androany teo amin'ny tantara: 14 Septambra 1908 Anatoliana sy Oriental Railway mpiasa no nitokona.
Nanao fitokonana ireo mpiasan'ny lalamby Belza